Waa Maxay Qaladkii Ugu Waynaa Ee Ay Galeen Jaalliyadda Hirshabeelle Ee Nairobi Intii Lagu Guda Jiray Munaasabaddii Soo Dhawaynta Waare | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Waa Maxay Qaladkii Ugu Waynaa Ee Ay Galeen Jaalliyadda Hirshabeelle Ee Nairobi...
Jaaliyadda Hirshabeelle ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa xalay soo dhaweyn iyo taageero qiimo badan u sameeyay madaxwaynaha maamulkaas mudane Waare kaas oo dhawaan loo doortay xilkaas.
Balse qaban qaabiyayaashii xalfaddaas ayaa sameeyay qaladaad waa wayn oo ay dadka qaar ku tilmaameen in ay ahayd wax liita, maadaama boorarkii xalfadda ay ku xardhanaayeen sawirrada madaxwayne Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare kheyrre kuwaas oo wax badan ka shaqeeyay sidii loo dib dhigi lahaa maamullada aan ahayn Jubbaland iyo Puntland.
Ma jirin sabab keeni kartay in ay la wareegaan sawirka Farmaajo iyo Kheyrre mar haddii arrintu ay tahay mid maamul, sidaa darteeda waxa ay ahayd qalad ay galeen dhallinyaradii iyo shakhsiyaadkii waday qaban qaabada munaasabaddaas.
Waa ay dadaaleen marka la fiiriyo sidii ay ugu muujiyeen taageerrada hasa yeeshee qaladka wuxuu ka jiray markii sawirrada Kheyrre iyo Farmaajo ay la wareegeen intii Hoolka la joogay.
Haa waa madaxda qaranka, balse waxaa mudan in sharci ahaan loo eego, waxa ay mudnaayeen in ay soo qaataan sawirrada xildhibaannada, wasiirrada iyo shakhsiyaadka wax galka ah ee kasoo jeeda maamulkaas islamarkaana door muhiim ah ka geystay sidii loo badbaadin lahaa Hirshabeelle.